पाचँ वर्षदेखि प्लाष्टिकको डोरिको बन्धनमा बस्न विवस ओमकार – Etajakhabar
पाचँ वर्षदेखि प्लाष्टिकको डोरिको बन्धनमा बस्न विवस ओमकार
नेपालगन्ज २७ असोज । बाँकेको डुडुवा गाउँपालीका वडा नंं. २ का एक १९ वर्षीय किशोर ५ वर्षदेखि डोरिले बाँधीएर बस्न बाध्य छन् । मानसिक असन्तुलन भएका वडा नं. २ को बाबागाउँका ओमकार वर्मा ५ वर्षदेखि दुबै खुट्टामा प्लाष्टिकको डोरिले बाँधिएर बस्न विवस हुनुभएको हो ।
१४ वर्षको उमेरमा एकाएक मानसिक सन्तुलन बिग्रेपछि वर्मा गाउँबाट हराएका थिए । हराएको केहि महिनापछि उनि भारतको नवावगन्जमा भेटिएका हुन । घर ल्याएपछि पनि गाउँकै खेतमा २–३ पटक डुब्दै गर्दा बचाइएको वर्माका वुबा महाजन कुर्मी बताउछन ।
छोराको उपचारका लागि भारतको धेरै अस्पतालहरुमा धाएपनि सन्चो नभएको कुर्मीको दुःखेसो छ । पटक–पटक हराउने र जोखिमपुर्ण क्रियाकलाप गर्न थालेपछि डोरिले बाधिएको ओमबारका बुवा बताउछन । दुबै खुट्टामा बाँधीएको डोरीसँगै वर्मा छरछिमेकमा हिड्न डुल्न भने पाउने गरेको परिवारजनले बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन २७, २०७४ समय: १८:१२:०७